Apple dia mitanisa ireo loharanom-peo izay hotohanan'ny HomePod | Avy amin'ny mac aho
Apple dia mitanisa ireo loharanom-peo izay hotohanan'ny HomePod
Araka ny nolazaiko tao amin'ny lahatsoratra teo aloha, Apple dia manomana ny tany amin'ny fahatongavan'ireo singa voalohany ao amin'ny HomePod ho an'ny tompony amin'ny 9 febroary. Raha mankany amin'ny tranokalan'ny Apple amerikana ianao, dia mbola misy ny HomePod miaraka amin'ny daty fanaterana tombanana amin'ny 9 feb. andro maromaro aorian'ny nividianana azy, toe-javatra iray izay niteraka fisalasalana momba ny fitakiana ny HomePod.
Na izany na tsy izany dia mazava i Apple fa rehefa tena manomboka mahatratra trano izy ary manomboka hita ny fahafaha-manao azy dia mivarotra lafo.
Izany no antony nanavaozan'ny Apple ny pitsony teknika an'ny mpandahateny HomePod vaovao ho an'ny antsipirihany izay loharanom-peo mifanaraka.
Ireo mpampiasa dia afaka mitendry audio avy amin'ireto loharano manaraka ireto:
● Mozika Apple
● Fividianana iTunes Music
● iCloud Music library miaraka amin'ny famandrihana Apple Music na iTunes Match
● Miteny Radio mivantana 1
● AirPlay atiny hafa ho an'ny HomePod avy amin'ny iPhone, iPad, iPod touch, Apple TV ary Mac
Mazava ho azy fa mila famandrihana Apple Music ianao hilalao hira avy amin'ny serivisy streaming. Na dia tsy hanohana pairing stereo na audio misy efitrano maromaro aza ny HomePod rehefa manomboka, Inoana fa ireo fiasa ireo dia mety hiaraka amin'ny fanavaozana ny iOS 11.3.
Ka raha tsy manana ny tsikera ataon'izy ireo ianao amin'ny Apple Music ary hividy HomePod ianao dia azo antoka fa hanao fampielezan-kevitra i Apple hanohizany ny fahazoana mpamandrika amin'ny serivisiny streaming Apple Music. Tsy misy isalasalana fa miatrika zavatra andrasana fatratra isika ary, toy ny nitranga tamin'ny Apple Watch, Apple dia tsy hanome data momba ny varotra ho an'ny vokatra vaovao ka ny fifaninanana dia manana tahiry kely indrindra.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Apple products » Apple dia mitanisa ireo loharanom-peo izay hotohanan'ny HomePod
Tonga injenieran'ny tetezana miaraka amin'ny Portal Bridge Constructeur mahafinaritra